तीन सांसद खोज्दै प्रहरी, फेला पार्नै सकेन,कहां छन त ? | Sabaiko Online
Home Flash News तीन सांसद खोज्दै प्रहरी, फेला पार्नै सकेन,कहां छन त ?
तीन सांसद खोज्दै प्रहरी, फेला पार्नै सकेन,कहां छन त ?
काठमाडौं । मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित तीन सांसद प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन् ।
तीनैजना प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित सांसद हुन् ।
ललितपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट नेकपा एमालेका निर्वाचित सांसद तथा पूर्व डीआईजी नवराज सिलवाललाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन कीर्ते सम्बन्धमा सोधपुछका लागि प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ । तर पनि फेला पार्न सकेको छैन ।
ललितपुर प्रहरीलाई उनको खोजी गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाउन पत्राचार गरिएको थियो । ललितपुर प्रहरीले फेला नपारेको भन्ने पत्र फिर्ता गरेपछि प्रहरीले ७७ वटै जिल्लामा नवराज सिलवालको खोजी गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कीर्ते गरिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले नै गरेपछि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम नै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
प्रहरीले सिलवाललाई खोज्न आइतबार करिब १५० प्रहरी भट्टेडाँडामा पठाएको थियो । तर पनि फेला पार्न सकेन ।
अर्का निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी पनि प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन् । कैलाली १ बाट निर्वाचित राजपाका सांसद चौधरीले प्रमाणपत्र समेत पाएका छैनन् ।
उनलाई टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी मानिएको छ । उनी प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका छन् ।
कैलालीमा प्रहरी र डेढवर्षे बालकको समेत ज्यान जानेगरी भएको टीकापुर कान्डका उनी मुख्य योजनाकार रहेको भन्दै प्रहरीले खोजी जारी राखेको छ । त्यसैगरी मनाङबाट प्रदेश सभातर्फ स्वतन्त्र विजयी भएका दीपक मनाङेलाई पनि प्रहरीले खोजी तीव्र पारेको छ ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा अदालतले दोषी ठहर गरेका मनाङे प्रदेश ४ को अस्थायी मुकाम पोखरामा आइतबार भएको शपथ ग्रहण समारोहमा पनि सहभागी भएनन् ।
मनाङमा नेकपा एमालेकी आधिकारिक उमेदवारले उमेदवारी फिर्ता लिएर मनाङेलाई विजयी बनाइएको थियो ।
ज्यान मार्ने उद्योगमा उनलाई पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको भए पनि उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेको अवधि कटाएर अझै ३ वर्ष कैद भुक्तान बाँकी छ ।
प्रहरी प्रवक्ता मनोज न्यौपानले पनि तीनजनालाई खोजी जारी राखेको जानकारी दिए । उनले कोही अनुसन्धानको लागि र कोही अदालतको आदेश बमोजिम खोजीको क्रममा रहेको बताए ।